Ukondla Abasebenzi Be-Frontline Ezikhathini Eziyinselele - Wayback Burgers
I-Wayback Burgers Iphakela Abasebenzi Abangaphambili Ngesikhathi Esiyinselele
Meyi 1, 2020
I-MINT HILL, NC - Phakathi nobhubhane olubekela inselelo bonke abanikazi bezindawo zokudlela ukuthi baguqule amamodeli abo ebhizinisi kakhulu, indawo yaseWayback Burgers' Mint Hill igxile kokungaphezu nje kokusinda.
Njalo ngoLwesibili, uWayback Burgers unikela ngesidlo sasemini eqenjini elihlukile labasebenzi abaphambili. Emasontweni amahlanu edlule, balethe izinhlobonhlobo zamabhega nezinhlangothi eMnyangweni Wezomlilo wase-Mint Hill, eMnyangweni Wamaphoyisa ase-Mint Hill, e-Novant Health GoHealth Urgent Care Mint Hill, nase-Mint Hill Pharmacy.
"Sikwenza lokhu ukuze sibonge emndenini wethu kubo bonke abasebenzi abaphambili nabaphenduli bokuqala," kusho umnikazi u-Anna White. "Babeka izimpilo zabo engozini ukuze basigcine siphephile nsuku zonke."
NgoLwesibili, Ephreli 28, uWhite ulethe ukudla okungamashumi amabili eGumbi Lezimo Eziphuthumayo leNovant Health Mint Hill Medical Center. Abahlengikazi abamukele umnikelo wabo ekwamukelweni bamangala, babonga futhi bejabule, futhi bathembisa uWhite ukuthi uzosabalalisa ukudla kubasebenzi bakwa-ER.
Ukusho ukuthi yisikhathi esinzima nesingaqiniseki okwamanje sezindawo zokudlela kuwukubukela phansi. "I-COVID-19 ithinte abaningi abasizungezile, kubi kakhulu," kusho uWhite, olinganisela ukuthi balahlekelwe cishe amaphesenti angama-40 ebhizinisi labo ngesikhathi ubhubhane luqala ukugadla.
Naphezu kokwehliswa okukhulu kangaka kwenzuzo, uWhite uzibophezele ekuqhubekeni nokuhlinzekela abasebenzi bakhe. “Lapho konke kuqala, sasesaba kakhulu,” uyakhumbula. “Mina nomyeni wami saxoxa ngokuzolandela nalokho esizokwenza. Into eyodwa esasiyazi ngokuqinisekile ukuthi kwakufanele sinakekele abantu bakithi, umndeni wethu wakwaWayback, oma nathi kukho konke. Ngaphandle kwabo, asilutho. Siyabathanda futhi siyabanakekela bonke. Sinqume noma ngabe kuthiwani ngeke sibaxoshe abasebenzi bethu futhi sizobahlinzeka ngezidingo zabo uma nje singakwazi.”
I-Wayback Burgers isilungisele lokho uMhlophe akubiza ngokuthi “into evamile engaqinisekile” ngokusemandleni abo. "Sinezindawo zokuqhelelana ezimakwe ezitezi zethu, sihlanza yonke into usuku lonke, sigeza izandla ngemuva kwayo yonke into, sivala izikhwama zethu, sihlinzeke ngonogada abathimula ukuze bavikele abasebenzi namakhasimende ethu," kusho uWhite. "Singeze izinsiza zokulethwa kanye nezinsiza eziseceleni komgwaqo."
Ukuzibandakanya komphakathi bekuphezulu ohlwini lwezizathu uWhite akhetha ukutshala imali ku-Wayback Burgers. Njengoba babelungiselela ukuvula esikhathini esingangonyaka esidlule, uWhite wayebheke ngabomvu kuzo zonke izindlela ibhizinisi elalizomsiza ngazo ukuthi azibandakanye nomphakathi waseMint Hill, lapho yena nomndeni wakhe wabahlanu bakhe ikhaya labo kusukela ngo-2005.
“Sikholelwa ukuthi ukuzibandakanya emphakathini nokusiza abanye iyona ndlela yokuphila,” kusho uWhite. “Sikholelwa ekupheni. Sisiza umphakathi ngokusemandleni ethu, ngoLwesibili ngemva kolunye. Ukubona ukumamatheka ebusweni babasebenzi abaphambili kungaphezu kwalokho esingakucela. Konke kumayelana nokwesekana kulezi zikhathi ezinzima.”
"Siyabonga ngokuseseka komndeni wethu wase-Wayback kanye nomphakathi waseMint Hill!" kuqhuba uMhlophe. “Kube nengcindezi enkulu, kodwa ngiyakholwa ngokweqiniso uma lina, ilanga liyohlala liphuma.”
I-Wayback Burgers inikeza uku-oda ku-inthanethi ngewebhusayithi yabo nohlelo lokusebenza, ukulandwa okuseceleni komgwaqo, nokudiliva. Balandele ezinkundleni zokuxhumana ukuze uthole izindaba zakamuva nezipesheli.